कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ९ सय नाघ्यो, के भन्छन् WHO का प्रमुख ?
माघ २७, चीन । चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ९ सय नाघेको छ । गत वर्षको अन्त्यबाट वुहानबाट शुरु भएको भाइरसको संक्रमणको अध्ययन गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले एउटा टोलीलाई चीनमा नै खटाएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले फेब्रुअरी ९ मा थप ९७ जनाले ज्यान गुमाएको जनाएको छ । योसँगै चीनमा यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ९ सय ८ पुगेको छ । ज्यान गुमाउने अधिकांश वुहान र हुबेई प्रान्त आसपासका रहेका छन् । यस रोगबाट देशभर हालसम्म ४० हजार १ सय ७१ जना प्रभावित भएका छन् ।
अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वका २५ देशमा फैलिएको पुष्टि भएको छ । धेरै राष्ट्रले आफ्ना देशका नागरिकलाई हुेबईबाट फिर्ता लगिसकेका छन् भने मुख्य एयरलाइन्सले चीनमा आफ्नो सेवालाई तत्कालका लागि बन्द गरेको छ ।
संक्रमण फैलिएसँगै डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले चीनमा यात्राको इतिहास नभएकाहरुमा पनि यो रोगको संक्रमण फैलिएको देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अरु देशहरुमा सानो सङ्ख्यामा संक्रमण फैलिएको देखिएको छ । तर, यो हामीले देखेको हिमशीला ‘आइसबर्ग’ मात्र हुनसक्छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले सबै राष्ट्रहरुलाई भाइरसको संक्रमण भित्रन सक्ने सम्भावित अवस्थाबारे तयार रहन आग्रह गरेका छन् । साथै, सबैलाई नअत्तालिन पनि भनेका छन् । हालसम्म चीनबाहिर हङकङ र फिलिपिन्समा यस भाइरसको संक्रमणबाट मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।
यात्रुहरुको सुरक्षाका लागि सल्यानमा ‘एक गाडी एक स्टिकर’ अभियान, स्टिकर भित्र के छ ?
सल्यानकाे छत्रेश्वरी मन्दिरमा हजाराैंकाे भिड (फाेटाे फिचर)
तुलसीपुरमा लाग्गो भोटे मेला (फोटो फिचर)
सल्यान काभ्रा घटना : कविताको केटासँग फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो